Iindaba - Iinkampani zempahla yempahla yaseNtaliyane zisebenzisa iteknoloji yeRFID ukukhawulezisa ukuhanjiswa
I-Silicone Rfid Wristband/Isongo
Elukiweyo/Ilaphu leRfid Wristband
Iphepha leRfid Wristband/Isongo
PVC Rfid Wristband / Isongo
I-RFID Yolula I-Elastic Wristband/Isongo
IPlastiki Rfid Wristband
I-LED Rfid Wristband
Ikhadi le-RFID le-13.56MHZ
860mhz ~ 960mhz UHF ikhadi
Ikhadi leRFID yeChip ezimbini
RFID windshield ithegi/isincamathelisi
Ithegi yeLayibrari yeRFID
I-RFID Nail Tag
Ithegi ye-UHF RFID
RFID Inkunkuma tag yomgqomo
Ithegi ye-RFID PPS yokuLaundry
Ithegi yokuhlamba ye-Silicone ye-UHF
Ithegi yokuhlamba impahla ye-UHF
Ithegi yeNFC / yeCoin Tag
IiFobs eziphambili zeNFC
NFC Epoxy iithegi
NFC Reader Umbhali
Ubhali woMfundi weNFC ongaqhagamshelwanga
Mobile NFC Reader Umbhali
IiKhadi zePVC zePVC zoShicilelo ngokweSiko
Ithegi yomthwalo/iHang Tag
PVC Key fob/Snap-off isitshixo Tag
Iimveliso zokuThintela zeRFID
Isingxobo esingundoqo se-RFID seMoto
I-RFID yokuThinta iWallet yeKhadi
Ikhadi lokuThintela le-RFID
Ukuvala imikhono yekhadi
Casino / umdlalo / poker Chip
Ikhadi le-ID Printer
Umnikazi wekhadi lesazisi
Ubushushu boMzimba woKubonwa kobuso
Iinkampani zempahla yaseItali zisebenzisa itekhnoloji yeRFID ukukhawulezisa ukuhanjiswa
I-LTC yinkampani yase-Italiya yomntu wesithathu esebenza ngokukodwa ekuzalisekiseni ii-odolo zeenkampani zempahla.Inkampani ngoku isebenzisa indawo yokufunda ye-RFID kwindawo yokugcina kunye neziko lokuzaliseka eFlorence ukulandelela ukuthunyelwa okubhalwe okubhaliweyo okuvela kubavelisi abaninzi abaphathwa liziko.
Inkqubo yokufunda yaqaliswa ukusebenza ekupheleni kukaNovemba ka-2009. UMeredith Lamborn, ilungu leqela lophando lweprojekthi ye-LTC RFID, uthe ngenxa yenkqubo, abathengi ababini ngoku bakwazile ukukhawulezisa inkqubo yokuhanjiswa kweemveliso zempahla.
I-LTC, izalisekisa ii-odolo ze-10 yezigidi zezinto ngonyaka, ilindele ukucubungula i-400,000 yeemveliso ezibhalwe nge-RFID kwi-2010 ye-Royal Trading srl (ephethe izihlangu eziphezulu zamadoda kunye nabasetyhini phantsi kwe-brand ye-Serafini) kunye ne-San Giuliano Ferragamo.Zombini iinkampani zaseItali zifakela iithegi ze-EPC Gen 2 RFID kwiimveliso zazo, okanye zincamathelise iithegi zeRFID kwiimveliso ngexesha lemveliso.
Kwangoko ngo-2007, i-LTC yayiqwalasela ukusetyenziswa kobu buchwepheshe, kwaye umthengi wayo iRoyal Trading nayo yakhuthaza i-LTC ukuba yakhe inkqubo yokufunda yeRFID.Ngelo xesha, iRoyal Trading yayivelisa inkqubo esebenzisa iteknoloji yeRFID ukulandelela uluhlu lwempahla yeSerafini kwiivenkile.Inkampani yezihlangu inethemba lokusebenzisa itekhnoloji yokuchonga yeRFID ukuqonda ngcono uluhlu lwempahla yevenkile nganye, ngelixa ikhusela impahla elahlekileyo nebiweyo.
Isebe le-IT le-LTC lisebenzise abafundi be-Impinj Speedway ukwakha i-portal reader ene-eriyali ezisi-8 kunye nesifundi setshaneli esinee-eriyali ezi-4.Abafundi be-aisle bajikelezwe ngamacingo esinyithi, uLamborn uthi, ajonge kancinci njengebhokisi yempahla yempahla, eqinisekisa ukuba abafundi bafunda kuphela iithegi ezidlulayo, kuneethegi zeRFID ezisecaleni kwezinye izambatho.Ngethuba lesigaba sovavanyo, abasebenzi bahlengahlengisa i-antenna yomfundi wesiteshi ukuze ifunde iimpahla ezifakwe kunye, kwaye i-LTC iphumelele izinga lokufunda le-99.5% ukuza kuthi ga ngoku.
“Amazinga okufunda achanekileyo abalulekile,” utshilo uLamborn."Ngenxa yokuba kufuneka sibuyekeze imveliso elahlekileyo, inkqubo kufuneka ifikelele kwi-100 yeepesenti yokufunda."
Xa iimveliso zithunyelwa ukusuka kwindawo yokuvelisa ukuya kwindawo yokugcina impahla ye-LTC, ezo mveliso zinethegi ye-RFID zithunyelwa kwindawo ethile yokothula, apho abasebenzi bahambisa iipaleti ngabafundi besango.Iimveliso ezingabhalwanga phantsi kwe-RFID zithunyelwa kwezinye iindawo zokothula, apho abasebenzi basebenzisa izikena zebar ukufunda iibhakhowudi zemveliso nganye.
Xa ithegi ye-EPC Gen 2 yemveliso ifundwa ngempumelelo ngumfundi wesango, imveliso ithunyelwa kwindawo echongiweyo kwindawo yokugcina impahla.I-LTC ithumela irisithi ye-elektroniki kumenzi kwaye igcine ikhowudi ye-SKU yemveliso (ebhalwe kwithegi ye-RFID) kuvimba wayo wedatha.
Xa iodolo yeemveliso ezinelebhile ye-RFID ifunyenwe, i-LTC ibeka iimveliso ezichanekileyo kwiibhokisi ngokomyalelo kwaye izithumele kubafundi be-aisle ekufuphi nendawo yokuthumela.Ngokufunda ithegi ye-RFID yemveliso nganye, inkqubo ichonga iimveliso, iqinisekisa ukuchaneka kwazo, kwaye iprinte uluhlu lokupakisha ukuze lubeke kwibhokisi.I-LTC Information System ihlaziya isimo semveliso ukubonisa ukuba ezi mveliso zipakishwe kwaye zilungele ukuthunyelwa.
Umthengisi ufumana imveliso ngaphandle kokufunda ithegi yeRFID.Ngexesha elithile, nangona kunjalo, abasebenzi baseRoyal Trading baya kutyelela ivenkile ukuthatha uluhlu lweemveliso zeSerafini usebenzisa abafundi be-RFID ababambe ngesandla.
Ngenkqubo ye-RFID, ixesha lokuvelisa uluhlu lokupakisha imveliso lincitshiswa ngama-30%.Ngokuphathelele ukufumana iimpahla, ukusetyenzwa kwexabiso elifanayo leempahla, inkampani ngoku idinga umsebenzi omnye kuphela ukugqiba umsebenzi wabantu abahlanu;into eyayikade iyimizuzu eli-120 ngoku inokugqitywa ngemizuzu emithathu.
Le projekthi yathatha iminyaka emibini kwaye yadlula kwisigaba eside sovavanyo.Ngeli xesha, i-LTC kunye nabavelisi bempahla basebenza kunye ukumisela isixa esincinci seelebhile ezinokusetyenziswa, kunye neendawo ezingcono zokuleyibheli.
I-LTC ityale imali eyi-71,000 yeedola kule projekthi, ekulindeleke ukuba ihlawulwe emva kweminyaka emi-3.Inkampani ikwaceba ukwandisa itekhnoloji yeRFID ekuchongeni kunye nezinye iinkqubo kule minyaka mi-3-5 izayo.
Ixesha lokuposa: Apr-28-2022
Factory Yongeza :5Inqanaba C lokwakha iBao'guan Tech Park, eGuanlan, kwiSithili saseLonghua, eShenzhen, eChina.
Umzi-mveliso wongeza: kuMgangatho we-6, iZhongxing 4th Road, idolophu yaseHetang, iSithili sasePengjiang, isiXeko saseJiangmen, kwiPhondo laseGuangdong, eChina.